के तपाई पनि छिटो स्लिम हुन किटो डाइट गर्नुहुन्छ ? « Sansar News
के तपाई पनि छिटो स्लिम हुन किटो डाइट गर्नुहुन्छ ?
३० भाद्र २०७८, बुधबार १२:४५
पछिल्लो समयमा अधिकांश मानिसहरु शरीर चुस्त दुरुस्त राख्नका लागि विभिन्न एक्ससाइजसँगै किटो डाइट गरेको पाइन्छ । तर, किटो डाइट गर्नाले भविष्यमा आन्द्रामा क्यान्सर, अल्जाइमर लगायतका विमार हुने खतरा रहेको स्वास्थ्य विज्ञ बताउँछन् ।
जर्ज वासिङटन युनिभर्सिटीको स्कुल अफ मेडिसिनका प्रोफेसर निल बरनार्डले किटो डाइटमा लिइने खाद्य पदार्थले भविष्यमा यस्तो खतरा आउन सक्ने बताएका हुन् । उनका अनुसार किटो डाइट लिनेहरुलाई फाइदा भन्दा हानि बढी हुन्छ ।
उक्त रिर्सचमा किटो डाइट लिनेहरुमा सुगर तथा मिर्गौला जस्ता विमारीको पनि समस्या हुन्छ ।
किटो डाइटमा मासु, माछा, अन्डा, घिउ, क्रिम, चिज, ओखर, बदाम, तेल, एवोकाडो, हरियो तरकारी लगायतका धेरै प्रकारका मसला प्रयोग गरिन्छ । साथै किटो डाइटमा अत्यन्तै कम कार्बोहाइड्रेड हुने हुनाले छिट्टै मोटोपन घटाउने बताइन्छ । तर किटो डाइट धेरै खर्चिलो र स्वास्थ्यलाई पनि हुने भएकाले यस्तो डाइट लिनुभन्दा सन्तुलित भोजन गर्नुनै उपयुक्त हुने बताइन्छ ।